Fikradda ah adeeg fariin gaaban ayaa la helo caan ka badan waxa uu ku sameeyey taariikhda ee wada hadalka telefoonka. Waxaa lagu qiyaasaa in 3 qof 5 qof oo SMS ah maalin kasta u dirto qof. Tani waxay kuu sheegaysaa muhiimada ay leedahay SMS ah aduunka maanta aad. Labada su'aasha waxa ay tahay, sida farriimaha aan raad raac qoraalka iyo soo celin karo SMS aad ku badelay gaar ahaan xaalado aad u leedahay in laguugu beddelo telefoonada android ama arrimo aan iyaga laga badiyay. Maqaalkani waxa uu u socdo si loo eego tallaabooyinka gurmad sms iyo soo celiyo.
Kaabta iyo Soo Celinta SMS la Wondershare MobileTrans
Wax macno ah ma haddii aad waxaa lagu casriyeeyo qalab ama la beddelo gebi in qalab kale oo sare silsiladdaa. Wondershare MobileTrans bixisaa xal loo helo gurmad sms iyo soo celiyo mid ka mid kaliya click. Waxaa muhiim ah in halkan lagu xusey in ay ammaan tahay in ay isticmaalaan iyo lahaan lahayn wax khatar adiga ama qalab aad si. Sidoo kale, fariimaha soo celiyay u iman doontaa sida asalka ah si aadan u baahan tahay in laga walwalo ka bedelida.
1. fariimaha qoraalka ah ee kaabta in Computer ah
Halkan waxaa ku qoran tallaabooyinka sida loo raad raac fariimaha qoraalka ah si ay u computer la mid click.
Talaabada 2: bareesada in USB ah in ay ku xidhmaan telefoonka in kombiyuutarka. The Wondershare MobileTrans taageeri karaan macruufka iyo qalabka Android iyo isla ogaadaa doono telefoonka iyo shillinta xogta dib kartaa.
2. Soo Celinta SMS From A File kaabta
Talaabada 3: Isticmaal USB ah in aad telefoonka ku xiran aad Computer
Talaabada 4: Riix icon MobileTrans iyo dajiyaan faylka gurmad.
Talooyin wanaagsan Maareynta SMS on Android iyo macruufka.
1. takhalusid Old Messages toos ah.
Tani waa arrin aad u muhiim ah maaraynta SMS in aad casriga ah. Tani waa sababta oo ah haddii aadan si taxaddar leh, xusuusta telefoonka aad ka heli doonaa si buuxda oo suurogal ah in ay ka xanibeen farriimaha soo socda uu noqonayaa mid dhab ah. Halkan ikhtiyaarka ugu fiican waa in ay tirtirto fariimaha jirka si toos ah. Kuwani fariimaha jir ah loo doortay by user casriga ah oo dhigay hab user uu doonayo. Tusaale ahaan, android iyo macruufka leedahay ikhtiyaar ah la tirtiro fariimaha hore si toos ah marka mailkooda ayaa gaadhay heer qaar. Ma aha in aad u noqon mid ka mid ah iyaga la tirtiro mid mid. Waxa aad u baahan tahay in aad halkan ku samaynayno waa la qabsado goobaha aad telefoonka. Tag saldhig oo aad SMS ah ee aad taleefan ka yar goobaha guud. Raadi jir sanduuqa fariin delete oo hubi. Markaas xuduud SMS .Waxaa dhigay kartaa xadka in ay fariimaha qoraalka ah 200 ama ka badan haddii aad sidaa rabto. Tusaale ahaan, haddii aad qarka u saaran xadka 200 SMS, waxa dhaca waa in, sida xasuusta telefoonka aad helo ilaa 200 farriimo, waxa ay si toos ah u tirtirtaa Fariimaha ka weyn in aad telefoon oon ku furin ilaa meel fariin aad. Iyada oo ay taasi, xusuustaada ma noqon karo buuxa ilaa xad ah ee aad la joojiyo ka helaya farriimaha. Eeg sida ay si joogto ah u tirtirto fariimaha iPhone .
2. Isticmaalka Wararka Delivery.
3. Dejinta Up Response Automatic.
4. jadwal u SMS ah.
Waxaa jirta waddo fiican lahayn si ay u maareeyaan SMS diraya tahay isticmaalka fursadaha jadwalka ee qalabka Android iyo macruufka. Tusaale ahaan, aad rabto in aad qof ugu horeeyay ee u doonayo dhalashada soo dir saaxiibkaa, oo dhan waxaad u baahan tahay inaad samayso waa in ay u balan at 12am aad marka ay hurdaan. Just nooca fariinta, u tag ikhtiyaarka, iyagaa doorta kaltanka iyo talooyin taariikhda iyo waqtiga. Waxaa si toos ah u dirayaa markii wakhtigii la gaaro. Fiiri jadwalka sare sms halkan.
> Resource > Top List > One Click to kaabta iyo Soo Celinta Labada macruufka iyo Android SMS